आजपनि घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति ? – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/आजपनि घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति ?
आजपनि घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति ?
ज्योति न्यूज२०७७, १२ मंसिर शुक्रबार १०:५०
काठमाडौँ । सुनको मूल्य ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । शुक्रवार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । २ सय रुपैयाले घट्दै सुनको भाउ शुक्रवार तोलामा ९१ हजार ३ सयका दरले कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै तेजावी सुन भने ९० हजार ८ सयमा कारोबार भइरहेको छ ।
मंगलबार ह्वात्तै घटेको सुनको मूल्य बुधबार एक हजार रुपैयाका दरले घटेको थियो । विहिबार भने सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको थियो। विहिबार छापावाला सुन ९१ हजार ५ सय तथा तेजावी गोल्ड ९१ हजारमा कारोबार भएको थियो ।
आइतबार बढेको सुनको मूल्य सोमबार भने स्थिर रहेको थियो । मंगलबार सुनको मूल्यमा १ हजार ८ सयले गिरावट आएको थियो । यो सँगै मंगलबार छापावाला सुनको मल्य प्रतितोला ९२ हजार ५ सय कायम भएको थियो । यस्तै तेजावी गोल्डको मूल्य ९२ हजार रुपैया कायम रहेको थियो ।
आइतवार र सोमबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ९४ हजार तीन सय रुपैयाँ तोकिएको थियो ।त्यसैगरी तेजावी सुन भने ९३ हजार आठ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आइतवार सुन प्रतितोला ३ सयका दरले बढेको थियो ।
यस्तै चाँदीको मूल्य पनि घटेको नै छ । आज १० रुपैयाले घट्दै प्रतितोला ११६५ कायम भएको छ । आइतवार र सोमबार स्थिर रहेको सुनको भाउ मंगलबार तोलामा ११८० का दरले कारोबार भएको थियो । सोमबार दिन चाँदी १२ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । विहिबार पनि चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको थियो ।
मानव बेचबिखनको आरोपमा सुवेदी पक्राउ
सुहागरात मा यौ*’न स म्पर्क गर्दा–गर्दै पलङ नै भाँचिएपछि जोडी आस्पताल भर्ना….